Pabrika mofomamy amin'ny alàlan'ny Aluminium, mpamatsy vola - Mpanamboatra profil Aluminum Shina
Ny FOEN dia mpamatsy tambazotra aluminium avo lenta, izay akora vita amin'ny alumina sy metaly hafa mba hanatsarana sy hanomezana tombony ny fananana.
Matetika isika dia mamolavola ny fiaraha-miasa akaiky amin'ny mpanjifantsika, miantoka fifanarahana tonga lafatra eo anelanelan'ny metaly sy ny fanamby eo am-pelatanana.
Ny fampihenana ny fisondrotan'ny hafanana: ny kojakoja vita amin'ny aluminiana vita amin'ny alàlan'ny hafanana miady amin'ny halehiben-tsolika dia 1.8-3.5W / m2-k, izay ambany kokoa noho ny mombamomba ny alloy aluminium alokaloka 140-170W / m2k; ny famoahana ny hafanana hafanana dia 3.17-3.59W / m2- k amin'ny firafitry ny fitaratra goavam-be, ambany kokoa noho ny mombamomba ny alloy aluminium mahazatra 6.69-6.84W / m2-k, izay mahomby amin'ny fampihenana ny fisehoana amin'ny alàlan'ny varavarana sy ny hafanana entin'ny varavarana sy ny varavarankely.
Izahay FOEN dia manana ekipa R&D matihanina hamaritana ireo fomban-dàlana ho an'ny filan-dresakao, ary manana bobon-javatra efa vita isika no afaka mamonjy ny vidinao sy ny fotoanao.Dia manolotra serivisy ODM / OEM, fakana sary CAD ary famolavolana volavola ao amin'ny santionanao. 10-15 andro ho an'ny famokarana bobongolo ny fizahana santionany, miaraka amina kitapo azo refesina.Manao vidiny sy fanamarinana alohan'ny famokarana faobe.